Ubuntu 16.10 ichapedza rutsigiro rwayo muna Chikunguru 20 | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu 16.10 Vashandisi vachasiiwa vasina rutsigiro musi wa20 mwedzi uno. Izvi zvaziviswa kubva kuCanonical, kubvira senguva dzose, ichave mwedzi 9 kubva pakatangwa iyi vhezheni uye nekudaro, inguva yekuonekana.
Neichi chikonzero, vashandisi veiyi inoshanda system, inoda kuvandudzwa kune iyo nyowani vhezheni 17.04, iyo yepamusoro shanduro yeUbuntu kusvika parizvino. Neiyi nzira, ivo vanozogona kugamuchira yakagadziridzwa rutsigiro uye kwete kusara kumashure.
Izvi hazvireve izvozvo Ubuntu 16.10 rega kushanda, asi kunyangwe zvikashanda, Canonical haichazonetseke kugadzirisa software yekugovera iyi, Kuisiira pane tsitsi dzekusagadzikana izvo zvisinga gadziriswe uye nekudaro, kune wechitatu-bato kurwisa.
Iva nechikwata pasina rutsigiro kune ngozi, kunyanya kana iwe uri munzvimbo yebasa kana yekusimudzira. Kurwiswa kana kukanganisika kunogona kugadzirisa basa rako rakaomarara, pamwe nekufambisa espionage yeindasitiri uye kupinza.
Ubuntu 16.10 zuva rasvika Gumiguru 13 gore rakapera, uye ikozvino 9 mwedzi uye 7 mazuva gare gare, iye achati akaonekana nenzira yakajeka. Vashandisi vanogona kukwidziridza kune vhezheni 17.04 munzira dzinoverengeka. Pamwe iwe unogona kuisa Ubuntu 17.04 kubva pakutanga, kana iwe unogona kusimudzira pasina fomati kune inotevera vhezheni, nekuda kweiyo Ubuntu yekuvandudza nzvimbo.
Imwe sarudzo ndeye kuisa vhezheni 16.04 LTS. Ubuntu 2021 ichavawo nerutsigiro rwepfupi, sezvichaitawo Ubuntu 5 yeramangwana, saka maitiro acho achadzokororwa pane izvi zvekugovera.
Kubva pano, Isu tinongofanirwa kutenda Ubuntu 16.10 yemasevhisi akapihwa uye unakirwe nekuzara aya mazuva gumi nemashanu anosara ekutsigirwa, usati wanyatso shandura sisitimu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Ubuntu 16.10 ichagumisa rutsigiro rwayo muna Chikunguru 20